0.0.2 Maxaa loo hayaa tusahan bloggen? Waxoogaa yar oo naftayda ku saabsan ah
1.1 1. Xullo martigaliye web wanaagsan iyo magac domein
1.1.1 Magacyada-domein – Xagee la iska diiwaangeliyaa?
1.1.3 Lagula taliyay Blog Martigelinta ee Nieuwelingen
1.2 2. Ku tilmaan bogga ‘DNS-domein’ martiyahaaga webka
1.5 2. Naadiyo WordPress-thema’s Naadiga
2.1 Sida loo doorto niche bloggen saxda ah?
2.1.2 2. Was aad jeceshahay
2.1.3 3. Mawduuc leh awood sii jira (walige le walwal leh)
3.1 1. Qor was ay dadku doonayaan inay akhriyaan
3.3 3. Hubso inaad balooggu fudud wax u akhriyi karo
3.4 4. Faallooyinka-blog
3.5 5. Qalabka Q&EEN
5 Bloggen Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Maxaa loo hayaa tusahan bloggen? Waxoogaa yar oo naftayda ku saabsan ah
Waxaan aasaasay Xogta Dahsoon ee Shabakadda Diiwaangelinta Websaydhada (WHSR) dib-u-noqoshada 2008, oo waxaan qayb ahaan uga mahadcelinayaa soo dhaweyn aad u wanaagsan oo ay sameeyeen baraha bulshada oo aya Tan iyo markaas, WHSR waxay kortay inay noqoto mid ka mid ah shabakadaha ugu horreeya ee Net ee talo-siinta martigelinta websaydhada, waxaanan u soo jiiday sumadda qaar ka mid ah codadka ugu xoogga badan ee ku jira baloog garayaaudaudooda buugga iyo goobta, sameynta waa marin loo adeegsado qofkasta oo ka bilaabaya dariiqa blog-ka ee iskiis loo martigaliyay.
Tilmaamahan macno-darada ah, waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah dhaqso, fududahay-fahamka iyo ka sarreeya dhammaan xalka wax ku oolka ah ee ku saabsan dhibaatooyinkaaga bloggen – oo laga soo qaatay waaya-araaaaa.
Mijn bogga qoraaga bogga Problogger.net – Waxaan si joogto ah ugu daabacay tiro badan oo hagitaan ah oo ku saabsan bogga hagaha blogger inta u dhexeysa 2015-2018.
Software-ka ugu caansan bloggen, WordPress.org, waa bilaash. Mawduucyada WordPress ee xirfadda leh iyo waxyaabaha la soo saaray waa bilaash. Oo waxaa jira malaayiin macalinno ah oo bilaash ah si ay kuu bilaabaan (oo ay ku jiraan kan). Qiimaha kaliya ee ku lug leh bilaabida balooggu waa lacagta aad kubixiso martigeliyaha shabakadda iyo magaca domein.
Xullo martigaliye web wanaagsan iyo magac domein
1. Xullo martigaliye web wanaagsan iyo magac domein
Si aad u biloowdo bog blog iskood u abaabulan, waxaad marka hore u baahan doontaa magac domein iyo koontada martigelinta websaydhka.
Martigelinta websaydhka, dhinaca boerenkool, waa meesha aad ku kaydiso waxyaabaha ku jira balooggaaga – ereyada, mawduucyada blog, sawirrada, fiidiyaha, iyo wixii la mid ah.
Magacyada-domein – Xagee la iska diiwaangeliyaa?
Ogsoonow inay muhiim tahay in la kala saaro diiwaangelinta domain-ka iyo websaydhkaaga. Kaliya sababtoo ah martigaliyahaaga webku wuxuu bixiyaa domein bilaash ah micnaheedu maaha inaad u ogolaato shirkadda martigelinta inay maamusho diiwaangelintaada domein. Shakhsi ahaan, waxaan u isticmaalaa NameCheap si aan u maareeyo diiwaan gelintayda; laakiin diiwaan-gelinnada boerenkool ee sumcad-celinta sumcad-celiyaha boerenkool kastaa waa inay fiicnaadaan. Marka aan sidaa yeelo, waxaan awoodaa aan was ka badelo degelkeyga DNS mar alla markii aan rabo oo aan iska ilaaliyo in aan ku xirnaado hal webside web gaar ah. Waxaan si xoogan kuugula talinayaa inaad sameyso isku mid si aad u ilaaliso naftaada.
Snelheid – Waxaad ubaahantahay marti qaade si dhakhso badan u xamaasha maxaa yeelay xawaaraha wuxuu saameeyaa khibradaha isticmaalaha iyo qiimeynta raadinta.
Lagula taliyay Blog Martigelinta ee Nieuwelingen
Marti gal laba baloog oo kujira InMotion Hosting oo ah $ 3,99 / mnd.
Marti-geliyaha ayaa ah mid ka mid ah martigaliyayaasha webka ugu jaban ee hareeraha ah, gaar ahaan inta lagu gudajiro mudada diiwaangelinta. In kasta oo ay tahay shirkad martigelinaysa miisaaniyad, Hostinger wuxuu soo bandhigayaa tiro badan oo ah qaababka martigelinta qaddarka leh ee ku habboon dadka wax qora.
2. Ku tilmaan bogga ‘DNS-domein’ martiyahaaga webka
Marka ku xigta, waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso diiwaanka DNS ee diiwaangeliyaha magaca domain (meesha aad ka diiwaangashan tahay qaybtaada tallaabada # 1) si aad ugu tilmaantid adeegahaaga martigeliyaha website, Hosting.
Tusaale: Tilmaam websaydh magacyada ‘InMotion Hostingerer’ en GoDaddy.
Waa kuwan tilmaamaha-tallaabada-tallaabada ee cusboonaysiinta boggaaga blog-ka op GoDaddy of Namecheap.
U samee database voor WordPress ee server-kaaga shabakada, iyo sidoo kale adeegsade MySQL oo leh dhamaan mudnaanta helitaanka iyo wax ka beddelidda.
U zoo celi wp-config-sample.php faylka wp-config.php.
Waxyaabaha manier u kala duwanaan karaan martigeliyaasha websaydhada kala duwan laakiin howsha asal ahaan waa isku midden. Ha welwelin haddii aadan adeegsan mid ka mid ah marti-geliyayaasheyda aan halkan ku muujinayo.
Shakhsi ahaan waxaan u maleynayaa WordPress inuu yahay habka ugu fiican ee wax lagu qoro ee loo yaqaan ‘nieuwelingen’. Iyada oo ku saleysan tirakoobyada laga dhisay Dhismaha, in kabadan 95% ee boggaga internetka ee Mareykanka waxaa lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo WordPress. Caalamka, waxaa ku dhawaadba 27 bilyan oo blog ayaa ku shaqeeya WordPress.
Nooca ugu dambeeyay ee WordPress waqtigan xaadirka wax lagu qorayaa waa nooca 5.3.2 – caadi ahaan waad u adeegsan doontaa WordPress Gutenberg sida qoraalka qoraalka. Gutenberg waxay keentaa dabacsanaan badan oo ka timaadda masraxa WordPress-ka. Tani waxay si gaar ah faa’iido u leedahay bilowga maadaama waxyaabo badan sida dejinta midabada asalka iyo inbadan oo aan hada u baahneyn nambar. Nidaamka xannibaadda wuxuu ka caawiyaa maareynta qaabka maqaalka sidoo boerenkool.
Si aad u qorto oo u daabacato boostada cusub, si fudud u raac dhinaca bidixda bidix, riix ‘Posts’> ‘Nieuwe toevoegen’ oo waxaa laguu tilmaami doonaa shaashadda qoraalka. Guji ‘Horudhac’ si aad u aragto sida waxyaabaha u egyihiin dhinaca hore (wixii ay akhristayaashu arki doonaan), riix ‘daabac’ marku dhammeysto.
Hallo! Waxaad hadda daabacanaysaa maqaalkeedii ugu horreeyay ee la daabacay.
2. Naadiyo WordPress-thema’s Naadiga
Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad maqashid naadiyada Theme, waa sidan sida ay u shaqeyso: Waxaad bixineysaa lacag go’an oo aad ku biireyso naaddiga waxaadna ku heli doontaa naqshado kala duwan oo heliyada laga. Mawduucyada lagu bixiyo Naadiga ‘Theme Club’ sida caadiga ah waa kuwo xirfad ahaan loo habeeyay oo si joogto ah loo cusbooneysiisto.
Waxaa jira was badan oo boerenkool oo badan oo boerenkool – Naadiyada qaar xittaa waxay u qabtaan warshad gaar ah, sida hanti maguurtada ama dugsiyada; laakiin waxaan kaliya ku dabooli doonaa saddexda qodobkan.
Mawduucyada Heer Xarrago leh – In ka badan 80 premium WordPress-thema, riix halkan si aad u aragto muuqaalka dhabta ah ee dhabta.
Haddii aad tahay qof isticmaala WordPress waqti dheer, waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay StudioPress. Waxay caan ku tahay tan Qaab-dhismeedka Bilowga, minimalistische iyo SEO-saaxiibtinimo nidaamka WordPress voor dhammaan mawduucyada StudioPress.
Wax dheeri ah baro: Halkan waxaa ah dhowr waxyaabood oo boerenkool oo fudud oo aad sameyn karto si aad u difaacdo boggaaga WordPress
Qalabka ‘cache plugin’ waa mid loo baahan yahay in laga heli adduunka ee blogging adduunka – waxay si fiican u horumarineysaa khibradaha isticmaalaha iyadoo la kordhinayo waxqabadka server-ka, yareynta waqtiga loo qaatay soo dejinta iyo kordhinta xawaaraha Isku-xirnaanta bogga.
Haddii balooggu ku leeyahay sawirro badan – ka fiirso ku darista EWWW Image Optimizer. Waa hal-riix muuqaal muuqaal ah oo awood u leh inuu habeeyo faylasha sawirka maktabaddaada. Waxay sidoo boerenkool leedahay muujinta isku-dhejinta muuqaalka otomatiga ah si loo yareeyo xajmiga sawirrada inta aad gelineysid. Adoo kaamilinaya sawirada, waxaad yareyn kartaa wakhtiyada bogga xamuulka isla markaana aad ku kasban karto waxqabadka deg degga ah ee goobta.
Soo bandhigista tifaftiraha Gutenberg ee WordPress 5.0, dadka wax qora ayaa hadda abuuri kara waxyaabo ay ka mid yihiin iyagoo adeegsanaya tifaftiraha ku saleysan bogga. Xaraash ahaan, WordPress wuxuu bixiyaa xirmo nuxur ah oo aasaasi ah sida sadar, muuqaal, batoonka talaabo-ka-qaadista, gaaga-gaaban, iyo wixii la mid ah. Ku darista gelinta Gutenberg Block, waxaad kuhelaysaa waxyaabo badan oo kaqeybgal ah (tusaale ahaan – FAQ, sadion, astaan ​​qoraa, carrousel, guji-to-tweets, GIF-blokken, iwm) bartaada.
Aad bay u adag tahay inaad haysato tiro akhristayaal ah oo daacad ah markaad wax iska qoraysid internetka sababtoo ah dadku ma ogaan doonaan inaad tahay dhaleeceyn filim, dib u fiirinta cuntada, ama buug dhaleeceyn ah. Xayeysiiyayaashu waliba manier ka caga jiidi doonaan inay ku xayeysiiyaan maxaa yeelay iyagu garan maayaan waxaad tahay. Si aad u dhisto blog ah guuleysta, waxaad u baahan tahay inaad hesho niche.
Sida loo doorto niche bloggen saxda ah?
Waa maxay aqoontaada gaarka ah? Sidee ayaad u siin kartaa wax yaryar mawduuc aan qof boerenkool awoodin? Waxay xitaa noqon kartaa wareysi lala yeesho khabiir.
2. Was aad jeceshahay
3. Mawduuc leh awood sii jira (walige le walwal leh)
Weydii naftaada haddii ay tahay mowduuc soo jiidan doona akhristayaasha isla markaana abuuri doona dakhli – ha noqoto mid xayeysiin ah ama iibin ah. Haddii aad wax ku qoraysid bloggen si aad u taageerto meheraddaada jirta, barta ma soo gelisaa macaamiisha cusub? Haddii aad wax iska qoraysid uun sababta oo ah waxaad xiiseyneysaa mowduuca, ma jiraa hab aad ku kasban karto bartaada shaqsiyeed?
Tusaale # 1: Tani waa tirooyinka xayeysiiska ee loogu talagalay soo saaraha muraayadaha cayaaraha (waxay u maleynayaan noocyada isboortiga sida Adidas ama New Balance laakiin yar). Shirkadan ayaa wax ka badan $ 100.000 bishiiba ku bixisay Adwords sida uu sheegay Spyfu.
Tusaale # 2: Tani waa xayeysiisyada xayeysiinta ee adeeg bixiyaha IT. Waxaa jira qiyaaso badan oo 20 ah ciyaartoy boerenkool oo weyn. Shirkadan, gaar ahaan, xayeysiisyada iibsaday op trefwoorden 3.846 Google iyo ku qaatay $ 60.000 bishii.
Halkan waxaa ah shan istiraatiijiyadood oo aasaasi ah oo kaa caawin doona inaad blogkaaga ka qaadatid Maalinta 1 ilaa 1.000 moeras ee muuqaalka ah.
1. Qor was ay dadku doonayaan inay akhriyaan
Adeegso aaladda warbaahinta bulshada si aad ula socoto waxa ku guuleysta ee warbaahinta bulshada. Meelahaas oo boerenkool, waxaad ku abuuri kartaa fikrado nuxur ah oo jawaab celin wanaagsan ka hela warbaahinta bulshada.
Waa inaad had iyo jeer la wadaagtaa qoraalladaada, marrar badan. Haddii laguugu casuumo inaad ku biirto koox koox ‘Pinterest board’ oo u dhigma sida aad u fiican tahay, isqoro oo wadaag oo faallo ka bixi si joogto ah. Haddii aad ku biirto liistada kuwa maanka doorin kara, udhaca waa inay si joogto ah u wadaagi doonaan waxyaabaha midba midka kale ka kooban – toddobaadle ama maalinle. Tani waxay ka caawin doontaa kobcinta akhriskaaga iyo ka qeybgalkaaga.
Si joogto ah u raadi qabiilkaaga – abaalmarin xubnaha boerenkool ee ku jira oo xiriir la yeelo.
Ka caawi dhinacyada xafladaha Twitter. Faallo ka bixi qoraallada xubnaha boerenkool. La wadaag qodobbada wargeysyadaada. Soo uruuri oo abaalmari boggaga internetka ee aad jeceshahay adigoo soo bandhigaya mid toddobaad kastaa ama bil kasta ah.
Weydii sida aad qof boerenkool uga caawin karto boostada martida ama martida boosaska dhibcaha. Iibso alaabta ay isticmaalaan, isticmaalaan xulafadooda la xariira, waxay kor u qaadaan xiriirkooda warbaahinta bulshada markaad ku dhejineyso. Sida fursado lagu qoro booggeylayaashu waxay soo baxaan, kuwan bloggaalku waxay xasuustaan ​​caawimadaada waxayna kugu martiqaadayaan inaad kaqaybqaadato.
3. Hubso inaad balooggu fudud wax u akhriyi karo
Marka laga eego waxa aan kor ku soo qaatay, baloogguagu kuma qasbi karo akhristayaasha wax lala soo baxo iyo badhamada. Bedelkeeda, u bent zo bandhig jawaabta si xirfad leh akhristayaashaada. Baro caqabadaha waqtiga akhristayaashaada oo fahanto waxa ku kallifaya inay kusii joogaan boggaaga.
Kordhi bartaada barta adigoo adeegsanaya madax-hoosaad, madax hoosaadyo, dhibco xabbad leh, ama liisaska tirooyinka leh. Tani waxay ka caawineysaa waxyaabahaaga inuu u muuqdo midden abaabulan.
Marka hore, faallooyinka boggaga internetka ayaa ah sida ugu macquulsan ee loo tixraaci karo habka loo dhisayo taraafikada – badanaa sababta oo ah dadku waxay nuugaan sameynta tayada, wadahadalada macnaha leh ee lala nahaah Si kastaba ha noqotee, faallooyinka blogku waa hab tayo leh oo lagu dhisayo taraafikada kaas oo waliba xor u ah – taas kama doodi karto taas!
Had iyo jeer qor faallo tayo leh. Haddii aadan haysan wax macno leh oo dooddu ku darto, ha uga tagin faallooyin ("Waad ku mahadsan tahay dhejintii wanaagsan") ee faallooyinka… waa wax aan faa’iido lahayn)
In kasta oo sharci boerenkool (maaha xeerka dahabiga ah, laga yaabee), haddii aad ka tagto xiriir, ha siin kaliya URL-gaaga. Taabadalkeed, kuxiir boostada ay khusayso ee kuu gaarka ah taas oo qiimaha ugu kordhisa boostada asalka ah iyo wadahadalka. Isukeenida ayaa fure u ah halkaan.
5. Qalabka Q&EEN
Abuur waxyaabo gaar ah oo caadifad la leh wadahadal gaar ah oo kulul. Tusaale ahaan, haddii qof weydiiyo sida wax loogu sameeyo lambarka .htaccess, waxaad qori kartaa waxbarista oo aad ugu dhajin kartaa bartaada – ka dibna, qaybta Q&A ee goobta, uga jawaab jawaabihii shaashadda, adigoo ku xiraya bartaada. si aad u hesho nambarada buuxa iyo demo’s. Arinta jirta ayaa ah in haddii hal qof weydiiyo su’aasha, kuwa kale ay leeyihiin isla su’aashaas – oo jawaabtaada golaha iyo xiriirintaadu ay sii noolaan doonto si ay ugala tashadaan sidoo kale marka waqtigu.
Quora, Klout, iyo Yahoo! Jawaabaha – kuwanu waa seddex ka mid ah qaababyada guud ee ugu fiican ee Q&EEN
In kasta oo aalado bilaash ah oo waxtar leh iyo adeegyo shabakad ay intarnetka ka jiraan, haddana dhibaatadu waxay ka dhexaysaa dhammaan jaangooyooyin boerenkool ama / iyo qalab waqtigiisu dhammaaday.
Sida hadiyad qayb ka ah akhrinta hagaha ilaa halkan, waxaan ku siin doonaa liiska qalabka bilaashka ah ee aan mar walba isticmaalno WHSR. Nasiib wacan, waxaanan rajeynayaa inaad ku guulaysato safarkaaga bloggen.
Grammatica – Kaaliyaha qoraalka qoraalka ee ugu caansan.
Kleine PNG – Yaree cabirka faylasha .png.
Pik ilaa Grafiek – Aalad sahlan oo abuur abuur macluumaad ah.
Faylasha Morgule – In ka badan 350.000 sawirro ah oo loo adeegsado ganacsiga.
SEO ugu weyn – Nooca bilaashka ah wuxuu kuu oggolaanayaa in si si dhakhso leh u fiiriso bogga xiriirinta bogga (CF / TF).
WP Statistics – Isbarbardhig bloggaaga WordPress kuwa kale.
Bloggen Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Qiimaha lagu qiyaasay in lagu bilaabo baloog ay kujirto magac domein iyo marti galinta websaydhada ayaa ka hooseeya $ 100 sanadkii (in kayar $ 10 bishii). Kharashkani wuxuu ku saleysan yahay bog iskiis u habeysan (adoo adeegsanaya WordPress). Jebinta qiimaha waxay noqon doontaa: $ 15 sanadkii sanadkasta oo magac domein ah .com iyo qiyaastii $ 60 sanadkii lacagtii martigalinta webka.
Si aad u hesho sawir wanaagsan oo ah sida loo helo lacagta wax qorayaasha, waxaan u kala saaray laba nooc – mid waa meesha aad si toos ah ula macaamilayso macaamiisha ama xayeysiiyayaasha halka kan kalena yahay meesha aad kiyaba shaaba sha ayabi shaabi shaabi shaabi.
Markeer si toos ah ula macaamilayso macaamiisha ama xayeysiiyaasha, waxaad awood dheeraad ah ugu leedahay sicirka. Waxaad lacag ku kasban kartaa:
– Magaca boggaaga balooggaagu wuxuu u muuqdaa inuu yahay subdomein sida “myblogname.wordpress.com” ama “myblogname.tumblr.com”
Magaca magaca bartaada ayaa u muuqda subdomein sida “mijnblognaam.wordpress.com” ama “mijnblognaam.tumblr.com”
Scherm laga soo qaaday Nidaamka Xayeysiiska WordPress ee WordPress.